Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Madaxweyne Xasan Shiiklh Khudbad Dheeraa ma Fedel Castra-aa !!
August 18 2017 15:35:40
Madaxweyne Xasan Shiiklh Khudbad Dheeraa ma Fedel Castra-aa !!
Waxa uu ka hadlayey Munaasabadda Maalinta Shaqaalaha Aduunka ee 1-da May, si guud waa Maalin in laga hadlo u baahan hadii aan nahay Soomaalina kumaba sii jirno oo waxaa la og yahay Shaqalayn iyo halka aan kala maranayno, waxaaan ognahay tacdiyada jira iyo shaqo la’aanta baahsan ee ka jirta Soomaaliya oo dhan, waxa uu qof walba xasuustaa dhacdadii ugu danbaysey ee ka dhacday Badda Masar iyo Giriiga oo laga soo weriyey dhimashada ka badan 200 oo qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badani ahayeen kuwo waxbartay oo ka qalin jebiyey jaamacadaha laga hodmay ee ku yaala Geyiga Soomaaaliya.
Madaxwaynaha Soomaliya Xasan Shiikh Maxamuud waxa uu ka hadlay shaqo la’aanta jirta waxa una yiri. “shaqa la’aani waa ay jirta, laakiin hala is bar-bar dhigo intii shaqaynaysey markii aan xafiiska nimid iyo xiliga aan hada taaganahay” waxa uu Madaxwayne Xasan Shiikh intaa ku daray “waa ayaan daro in ay dhalinyradeenii Badda ku qaraqmaan” waa uu sii hadlay oo waxa uu yiri “Dowladda xil baa saran”.
Madaxwaynaha Soomaaliya waxa uu jeediyey khudbd dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, waxa uuna ku booriyey Wasiirada Xukuumadda Fedraalka Soomaaliya iney dib u dayactirtaan Xarumaha Wasaaradahooda si looga baxo Wasaaradaha isla degan.
“Ma aqbali karno in Wasiir ku socda Baabuur 100 kun oo doolar jooga kuna hor maro Wasaaradiisii oo bur-bursan” sidaa waxaa yiri Madaxwaynaha soomaliya.
Xasan Shiikh Waxa uu geeska geliyey dadka mar walba naqdiya ama dhincyada liita ama hooseeya ka eega arimaha Soomaliya, waxa uuna Madaxwaynuhu codsaday in inta aan la canaanan gaabiska siyaasada Dowladdiisa in marka hore la fahmo cabirka la qaadanayo iyo dalka Soomaaliya la bar-bar dhigayo.
“xaq uma lihin in lana bar-bar dhigo Dowlada Maraykanka oo jitey ka badan 200 oo sano, xaqna uma lihin in lana bar-bar dhigo Dowlada Ingiriiska oo jirtey 1000 sano, waxan idinka doonaynaa sida iyo nooc uu noqonayo dalka lana bar-bar dhigayo”.
Madaxwaynaha waxa kale oo uu ka hadlay dhibatooyinka Naafada, waxa uuna Wasiirka Shaqada iyo Arimaha Bulshada waydiistey in uu abuuro sanduuq wax loogu ururinayo Naafada Soomaaliyeed waxa uuna balan qaaday in uu isagu bilaabayo lacagta ugu horaysa oo lagu ridayo.
Waxa kale oo uu bogaadiyey Doorashadii Ururda Shaqalaha Soomaaliyeed ee uu ku soo baxay Maxamed Cusmaan xaaji. “waxay ahayd doorasho lagu dayan karo, waxay tusaale u tahay bulshada kale ee rayidka, waa in la ixtiraamaa doorashadaas waana hanbalyeynayaa anigoo ah Madaxwaynaha Soomaliya” ayuu yir Madaxwayne Xasan Shiikh.
Waxa kale oo uu ka hadlay oo uu aad u amaanay qaabka Xisaab celinta Hayadaha Dowlada. Waxa uuna yiri. “waxaan leenahay Wasaarad Maaliyadeed, Hanta dhowr guud, Xisaabiye, dabagal iyo wax is waydiin joogto ah, mana dhehayno waxaan nahay 100% cilado waa ay jiraan waana aan saxaynaa”. Madaxwayne Xasan waxa kale oo uu ku faanay iney bixiyaan Mushaaraadka Shaqaalaha iyo kan Ciidamada Dowlada in kastoo uu xusay iney soo daaahaan.
Dad badan ayaa Madaxwaynaha ka filayey inuu soo bandhigo xilka saaran dowladda oo madaxda ka yahay kaasoo ku wajahan wax u qabashada Dhalinyarada baaga muudadu ku dilootey meelo badan oo ay Magaalada Muqdisho ku jirto.
Mid ka mid ah dadkii nasiibka u helay inuu dhegaysto khudbadda Madaxwaynaha ayaa yiri. “Madaxwaynaha waxaan maanta ka rabney in uu Shaqalaha Ajnebiga ah ee jooga Soomaliya dalka ka saaro si ay fursado u helaan dhalinyarada Soomaaliyeed” mid kala hadlay oo yiri. “Waa ay wanagsanaan lahayd in uu sidaa yeelo laakiin goormaa beer lafo yeeshay? horta ma ku dhacaa?” Mid kalaa soo boodey oo yiri. “ugu yaraan inta shir la qaato madaxda Hayadaha waa uu ku qancin karaa iney shaqaaleeyaaan dhalinyarda Soomaaliyeed”.
Nin oday ah oo dhegaysanayey halka sheekadu marayso ayaa yiri. “Idinka waxay idiin kaga dhegan tahay waxqabad, aniga waxaan ka xumahay khudbadan iska socota oo aan Ajendaha lahayn, bal eega, imisa saac ayuu hadlayaa ma Fedel Castra-rihii Cubbaa oo Muddo Saacado ah Khudbeyn jirey” ninkii odyga ahaa waa uu sii hadlay waxa uuna yiri. “aniga waxay ila tahay in Madaxwaynu ugu yaraan uusan lahayn la taliye wanaagsan sababtoo ah Khudbaddiisu waa ay koobnaan lahayd waana la soo diyaarin lahaa”.
Gabagabadii Askari ka mid ah kuwa Koofiyad Gaduuda oo meel dambe Taagnaa ayaa kabaha Siibtey si uu Salaad isugu Diyaariyo, intii uusan Kabaha Bixin ayaa la yiri Booshkaan, Kabahaan iyo Qorigaan inta aad dhigeyso sow Waqti ma ahan? markaasuu yiri isagoo Qoslaya “ Anigaa idiinka aqaan Madaxweynaha mar hadii uu Khudbad Bilaabo Howshaad Doontaad qabsan kartaa, walee Fadhi badan ayaa idiin waajibey.